Insert.io: Usoro ntinye aka na ekwentị mkpanaaka | Martech Zone
Insert Emepụtara iji nyere ndị na-ere ahịa na ndị nwe ngwa aka imeri oge ọ ga-ewe iji ngwa metụtara ngwa wee nweta site na ọcha na ngwaọrụ onye ọrụ. Ihe ikpo okwu na enye otutu ihe nke kwesiri inwe ihe - ntinye - enwere ike ịmalite ya n'ime iOS na gam akporo ngwa ọ bụla dị na nkeji, na-enweghị mmepe mmepe. Ntinye bụ ihe eji arụ ọrụ na ngwaọrụ maka ịbanye, nkwukọrịta, ntụgharị, nnweta onye ọrụ, mgbanwe UI na omume ndị ọzọ.
Ndị nwe ngwa na-echepụta ọmarịcha echiche iji tolite ngwa ha - oke mmiri ndị dị oke mkpa dịka igwe na-aghọ ọwa kachasị nke ụlọ ọrụ ahụ. Ma mgbe ahụ, ha kụrụ mgbidi - ngwanrọ mmepe ngwa ngwa dị ogologo, ọtụtụ n'ime nnukwu echiche ahịa a ga-efu na usoro ma ọ bụ were ogologo oge iji mejuputa. Fanye Onye guzobere na onye isi ọrụ Shahar Kaminitz
Ihe ntinye teknụzụ nyocha pụrụ iche nke Insert na-amuta ngwà ngwà, ezigbo oge yana asụsụ ahụ onye ọrụ. Onye nchịkọta akụkọ nke ihe nchọgharị ahụ na-enye ndị ahịa ohere itinye atụmatụ na ngwaọrụ, kọwaa ndị na-ege ntị, mepụta ihe na-akpali akpali, ma chọpụta ihe gbara ha gburugburu, ha niile na-enweghị koodu.
Ntinye na-amalite site na nkwenye na ihe nwere ike melite njikọ aka ma ọ bụ nyere gị aka iru ihe mgbaru ọsọ azụmahịa gị.
Ikpo okwu na-enye gị ohere ịkọwapụta akara nyocha A / B ma nyefee nghọta nke ga-eme ka ị mechie akaghị na nkwupụta gị wee nwekwuo nsonaazụ ọma.
Insert dị njikere maka ụlọ ọrụ, yana atụmatụ nchebe nke mbụ yana nkwenye dị mma, ikike na usoro nyocha emere n'ime ikpo okwu. Insert Platform nwekwara ike ijikọta ya na njikwa njikwa ọdịnaya, nchịkọta, ahia akpaaka usoro na ndi ozo.
Tags: fanye.iomobile ngwaitinye aka na ekwentị mkpanaakamobile ngwa ọdịnala